Industrial Oksizenina Gas - China Qingdao Industry Gastec
Oksizenina argon azota CO2 Gas Varingarin'i fehin'aina
Oxygène Nitrogen Argon Gas Filling Station ho an'ny gas cy ...
Industrial Oksizenina Gas
oxygène entona (oksizenina Compressed)
Fanatsarana ny fandoroana
Kilasy mampidi-doza ho an'ny fitaterana
Oksizenina no vokarina amin'ny alalan'ny fiaramanidina separation.The fahadiovana dia 99,5% ny lahatsoratra .After-fanodinana, mpanamboatra 99,99% fahadiovana oksizenina.
Oxygène entona fahadiovana no manome:
fahadiovana High fahadiovana Super avo fahadiovana
M anufacture sy ny fampiasana:
Oksizenina no ampiasaina amin'ny fitsaboana fampiharana, fanapahana vy sy welding, toy ny solika oxidizer amin'ny balafomanga, sy amin'ny rano treatment.Oxygen ampiasaina amin'ny oxyacetylene welding acetylene mirehitra amin'ny O2 mba hamokatra tena mafana lelafo. Ao amin'io dingana, vy hatramin'ny 60 santimetatra ny hateviny dia tezitra tamin'ny voalohany kely oxy-acetylene lelafo, ary avy eo nanapaka haingana ny lehibe renirano O2.
Nahoana isika no afaka manome antoka ny kalitao ny vokatra;
Ny Varingarin'i nandalo ny fisafoana ny Departemantam-panjakana.
Efa nandroso varingarina fikirakirana fitaovana, indray mandeha fanafanana mba hanala ny hamandoana, sy ny hafa vacuum work.We mandatsa-dranomaso koa ny fanadiovana equipment.So ny fahadiovan'ny ny oksizenina gazy dia 99,999% ao amin'ny Varingarin'i.
Ny famenoana tsindry dia sufficient.We no mameno tatitra ho an'ny rehetra cylinder.This tatitra dia alefa any amin'ny mpanjifa miaraka amin'ny entona fitsapana tatitra.
Manana fitaovana fitiliana fametrahana mazava tsara, ary nanome toky varingarina rehetra sy ny mandatsa-dranomaso ho fitsapana eo anoloan'ny lahateny.
Custom varingarina boky
Custom varingarina loko
Custom varingarina miditra tsimoramora
Afaka manome fitsipika cylinders maro, toy ny GB5099, ISO9809, DOT-3AA, EN1964, dia, Mp
Ireto misy ny vokatra;
Outside savaivony fahafahana Gas fahaiza- Volavola halavan'ny Weight WP TP ara-nofo
MG V (L) (M3) Wall hateviny eo ho eo L eo ho eo W MPa MPa
S (MG) (MG) (Kg)
54 8.1 Anarana 1365 60
Previous: orinasa lafo vidy indrindra Steel seamless CO2 Gas
Next: Ambongadiny 99,9% 99,999% Medical ôksidana azôty
Fahafantarana mahatalanjona ny Helium manakiana amin'ny $ ...
Tatitra momba ny tsenan'ny oksizenina fitsaboana 202 ...
Ny hazo dia mety tsy mandray afa-tsy dioksidan'ny karbaona ...
Toro lalana momba ny fampiasana ara-toekarena ny Carbon D ...
Ny tsenan-tsolika gasikara dia misoratra anarana amin'ny fitomboan'ny ...